YBS Buses Launch Card Payment Service | Myanmar Business Today
Myanmar Doing Well in Backing Country’s Economy During the Pandemic: State…
Home Automobile YBS Buses Launch Card Payment Service
Yangon Region Transport Authority (YRTA) introduced the card payment service called Yangon Payment Service (YPS) on some of its bus lines such as 43, 96, 12, 14, 25, 30, 38, 62, 72, 87, 88 and 89 on July 21. Around 500 buses are now accepting card payment.
Between July 16 and 21, 9,129 cards were sold at 102 G&G stores across Yangon.
YRTA is planning to install card payment receiving machines on 600 buses from 21 bus lines
Users can top up the card from K1,000 to K50,000 in YPS card sold at YPS Card Sales and Service Centers opened in Sule, Thamaing, and Tamwe, as well as 102 G&G stores, City Hall Bus-stop, Myanmar Plaza Bus-stop, and Parami Bus Stop.
YRTA plans to increase the number of buses with YPS card reading machines.
Asia Starmar Transport Intelligent. won the bid to carry out the Yangon Payment System designed to facilitate payments for Yangon Water Bus, Circular Train, and shopping centers.
YBS ကား များဖြစ်သော (၄၃ ၊ ၉၆၊၁၂၊ ၁၄၊ ၂၅၊ ၃၀၊ ၃၈၊ ၊ ၆၂၊ ၇၂၊ ၈၇၊ ၈၈၊ ၈၉)စသည့်ယာဉ်လိုင်းများတွင် Yangon Payment Services (YPS) ကတ်ဖြင့် ယာဉ်စီးခပေးချေနိုင်သည့် စနစ်ကို ဇူလိုင် ၂၁ ရက်တွင် စတင်ကျင့်သုံးနေကြောင်းသိရသည်။
ယာဉ်အစီးရေငါးရာကျော်တွင် YPS ကတ်များ အသုံးပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်နေ့မှစတင်၍ G&G ဆိုင်ပေါင်း ၁၀၂ ဆိုင်တွင် ကတ်ပေါင်း ၉၁၂၉ ကတ်ရောင်းချခဲ့ရကြောင်းသိရသည်။
ယင်းစနစ်ကို လာမည့်သြဂုတ်လတွင်လည်း ယဉ်လိုင်းပေါင်း ၂၁ လိုင်းမှ ကားအစီးရေ ၆၀၀ကျော်တွင် ထပ်မံအသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။
YPS ကတ်များငွေဖြည့်ခြင်းကို အနည်းဆုံးငွေကျပ်တစ်ထောင်မှ အများဆုံးငွေကျပ်ပါးသောင်းအထိ ဖြည့်သွင်းနိုင်ကာ YPS ကတ်အရောင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုစင်တာများကို ဆူးလေ သမိုင်း တာမွေ နှင့် G&G ဆိုင်ပေါင်း ၁၀၂တွင် ရောင်းချလျက်ရှိသည်။
ထို့အပြင် မြို့တော်ခန်းမရှေ့ ကားမှတ်တိုင်၊ မြန်မာပလာဇာ ရှစ်မိုင်နှင့် ပါရမီ ကား မှတ်တိုင်တို့တွင်လည်း ဝန်ဆောင်မှုစင်တာများဖွင့်လှစ်ရောင်းချလျက်ရှိသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင် လက်ရှိပြေး ဆွဲနေသည့် YBS ယာဉ်လိုင်း ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ရှိပြီး YPSကတ် စနစ်အသုံးပြုနိုင်မည့် ယာဉ်အရေ အတွက်ကို တဖြည်းဖြည်းတိုးမြှင့် သွားရန် စီစဉ်ထားကြောင်းသိရသည်။
YPS ကတ်စနစ် အတွက် ၂၀၁၇ ခုနှစ်က လုပ်ကိုင်မည့်ကုမ္ပဏီအားတင်ဒါ ခေါ်ယူကာ စိစစ်ရွေးချယ်ခြင်း ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ယခုအကောင် ထည်ဖော် အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။
Previous articleDollar Rate Against Myanmar Kyat Stronger
Next articleMortgage Stimulates Sluggish Real Estate Market
အောက်တွင် မြန်မာလို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည် Daw Aung San Suu Kyi, the State Counsellor of Myanmar, said in her address to the country on September 25 that the...
အောက်တွင် မြန်မာလို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည် Despite the pandemic which has caused disturbances in trade flow, Myanmar foreign trade is in the good shape thanks to the healthy...
အောက်တွင် မြန်မာလို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည် The government of Myanmar has announced that it will provideatotal of K20 billion to over one thousand businesses, who applied...
Myanmar Doing Well in Backing Country’s Economy During the Pandemic: State...
Myanmar Rice Prepares for World Expo in Milan